IHolidayhome iLodge - I-Airbnb
I-Lodge e-Neudörfl enechibi elihle elikufutshane ikufuphi kakhulu ne-Wr. I-Neustadt (enebala legalufa kunye ne-asia-thermalbath Linsberg), kufutshane nesixeko somculo i-Wiesen, eyona ndlela yohambo olujikeleze i-Eisenstadt, i-Wien, i-Semmering ne-Schneeberg. Iibhayisekile ziyafumaneka!
Ungena kwiLodge efudumeleyo nepholileyo ekumgangatho ophezulu ukuya kwindawo egqunyiweyo. Imithi ye-chestnutt emidala kakhulu ikufutshane ecaleni kunye neentaka'(IZIQULATHO EZINGUNDOQO EFIHLILE) zijikeleza. Kuyenzeka ukuba inkuku yethu sele isiya kuthengisa iqanda lakho lesidlo sakusasa kwaye enye ikati iza ekoneni.
Xa ungena kukho i-anteroom enkulu yesquarish enamagumbi okuhlambela amabini kunye nekhitshi langoku elixhotyiswe ngokupheleleyo elineefestile ezinkulu kumazantsi egadi.
Kwicala lasekhohlo ungena kwigumbi lokuhlala elikhulu eliqaqambileyo kwaye emva kwegumbi lokulala elineebhedi ezimbini.
Kukho indawo yokuphumla yezempilo kwindawo elandelayo ye-cummunity yasekhaya ukuya e-Neudörfl enegadi yerozi kunye nevenkile ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi-Genussquelle enewayini kunye nezinye izinto ezikhethekileyo ze-gastronomic yase-Burgenland enethuba lokuthatha amanzi okuphilisa (aqulathe intsimbi) e-Sauerbründl nawe.
Kwiminyaka engama-40 eyadlulayo eWiesen yayingumnyhadala wokuqala weJazz obizwa ngokuba yiWiesener-Jazz-days. Ukusukela ngela xesha iWiesen ayisometropolis yamaqunube aswiti (ebizwa ngokuba yiAnanas-Erdbeeren), ikwayindawo entle kunye nekhethekileyo yenkcubeko yomculo kunye nokuba kufutshane neNeudörfl.
Isixeko esasisakuba yindawo yokuhlala iWiener Neustadt ikwasecaleni kweNeudörfl.
Indawo ekhuselweyo iMarzer (Rohrbacher) Kogl eneentlobo-zityebi isward kunye ne-pool-meadow inika ipali echaseneyo neentaba ezingqongileyo. Ke, ebusika ungahamba uye eSemmering uyokutyibilika ekhephini okanye kwi-sledging.